कसरी जाडो को लागी तपाइँको छर्कने को तयारी - आलु प्रणाली
सिँचाई मौसमको अन्त्यमा, पाइपलाइनबाट बालुवा र मलबेस हटाउने प्रक्रिया पूरा गर्नु आवश्यक छ। अत्यधिक बालुवा निर्माणले मेशिनको वजन बढाउन र संरचनात्मक क्षति निम्त्याउन सक्छ।
कार फ्ल्यास गर्नका लागि यी चरणहरू पालना गर्नुहोस्:
१. मुख्य ईसोलेटर स्विच गर्नुहोस्। यस प्रक्रियालाई पानी मात्र चाहिन्छ; सिँचाइ प्रणाली फ्ल्यासको समयमा रोक्न सकिन्छ।
२. प्रत्येक टावरबाट ड्रेन ट्यूबहरू हटाउनुहोस्। यी टयूबहरूबाट बालुवा र फोहोर हटाउनुहोस्।
नोट: ड्रेन पाइपहरू पुन: स्थापना गर्दा उनीहरूको रबर मुहरहरू पल्टाउनुहोस्। यसले सिलहरूको आयु विस्तार गर्दछ।
Draw. अन्तिम ड्र्या car्ग गाडीबाट बालुवा जाल हटाउनुहोस्।
Can. क्यान्टिलिभर पम्पबाट प्लगहरू हटाउनुहोस्।
The. ईन्जिन / पम्प सुरु गर्नुहोस् र मेसिन राम्ररी फ्लश गर्नुहोस्।
Water. पानी आपूर्ति बन्द गर्नुहोस् र नाली पाइपहरू, ग्रिट जाल, र क्यान्टिलिभर पम्प प्लगहरू बदल्नुहोस्। पानीको मौसमको अन्त्यमा मेसिन फ्ल्याश पछि हिउँ र पाइपिंगमा हुने क्षति रोक्नको लागि सुनिश्चित गर्नुहोस् कि ड्रेन पाइपहरू र प्लगहरू बदल्नु अघि सबै ड्रेन पाइपहरू पूर्ण रूपमा सुक्खा छन्।
भूमिगत पाइपहरूबाट पानी निकाल्दै
कामको एक महत्त्वपूर्ण चरण भनेको जमिनमुनिका सबै पाइपहरूबाट जमिनमुनि रहेको सिँचाइ प्रणालीमा पानीको डिस्चार्ज हो। तल्लो कुहिनोबाट प्लग हटाउन पूर्ण रूपमा रिसरबाट पानी निकाल्न आवश्यक छ। सबै प्लगहरू बदल्नुहोस् जब ड्राईनिंग पूर्ण हुन्छ प्रणालीमा कृन्तकहरूलाई रोक्नको लागि।
चिकनाई हाइज गर्नुहोस्
संयुक्त मेसिनको प्रत्येक -5-१० रिभोल्युसन पछि ग्रीसको साथ लुब्रिकेट गर्नुपर्दछ।
Solenoid भल्भ स्ट्र्रेनर सफा गर्दै
एक वर्ष मा कम्तिमा एक पटक यो strainer सफा गर्नु पर्छ। यो स्ट्र्रेनरले सोनेटोइड वाल्भको क्लोगिंग रोक्दछ जसले अन्त जेटको शट-अफ भल्भलाई नियन्त्रण गर्दछ।
टो हब लुब्रिकेशन
टाउड सवारीको टाउनिंग हब कमसेकम एक पटक एक पटक (प्राथमिकता शरद inतुमा) लुब्रिकेट हुनुपर्दछ।
पा wheel्गो पागल को कडाई जाँच गर्दै
सबै पा wheel्ग्र पागलहरू वार्षिक १२ 125 lb-ft (१ N० N • m) सम्म कडा हुनुपर्छ।
स्टिल विस्तार हुन्छ जब तापमान बढ्छ र संकुचन हुन्छ जब यो खस्छ। सिंचाई प्रणालीले काम गरिरहेको बेलासम्म यस घटनाले कुनै खतरा पैदा गर्दैन। यद्यपि, एक बर्षमा बनेको व्हील रूटमा पार्कि when गर्दा स्टीलको कम्प्रेसनको कारण संकुचनले संरचनात्मक क्षति निम्त्याउन सक्छ।
स्टीलको कम्प्रेसनको कारणले बनेका तनावहरू मेशिनको लम्बाईसँग बढ्छ। १,1500०० फिट (457 90 मीटर) भन्दा बढि मेशीनहरू यी तनावहरूको अधीनमा छन्, विशेष गरी जब तापमानको उतार-चढाव (+ to ० देखि ० डिग्री फरेनहाइट) र ह्विल ट्र्याक पार्कि track समस्या देखा पर्दा।
अफ सीजनको बखत मेशीन पार्किंग गर्ने बखत, अपरेटरले तलका मध्ये कुनै एक विधि प्रयोग गर्न सक्छ:
१. पार्क ह्वील ट्र्याक भरिएको ठाउँमा कारहरू।
२. व्हील ट्र्याकलाई काठको फल्याकहरूले छोप्नुहोस् (२ "X १२" [X१ X 2०2 मिमी])। तपाईंको टायर बोर्डमा केन्द्रितको साथ तपाईंको कार पार्क गर्नुहोस्।
T. टाउन्ड स्प्रिंकलर प्रणाली - टाई position पोजीसनमा प्रत्येक तेस्रो ड्रबर व्हील राख्नुहोस्।
Run. धावक सिंचाईका लागि सिफारिसहरू - एch्कर चेनहरू छोड्नुहोस् र अघिल्लो केसमा जस्तै मेशीन पार्क गर्नुहोस् जहाँ व्हील ट्र्याक बन्द थियो।
All. सबै ट्र्याकहरू बन्द गर्नुहोस् र सिंचाई प्रणालीलाई १००-२०० गज (5 १-११२ मी) मासिक सार्नुहोस्। 100० डिग्री सेल्सियस (-200 डिग्री सेल्सियस) माथिको तापक्रममा मात्र सिंचाई प्रणाली सञ्चालन गर्नुहोस्।
6-१० फिट (२.-8--10 मिटर) फ्याँकिएको सवारीसाधन बिच्छेद हुनुपर्दछ। स्प्यानहरू चिसो मौसम कम्प्रेसनको लागि साins्लोले सुरक्षित गर्नुपर्दछ।
जाडोको लागि तयारीको सामान्य विवरण
सबै प्रकारका सामानहरू: जाडोको लागि तयारी गर्दा निर्माताको सिफारिशहरू पालना गर्नुहोस्: पम्पहरू, विद्युत आपूर्ति, पाइपहरू र होजहरू। सामान्यतया यसमा समावेश छ: ग्रीसिंग, ड्रेन पाइप सफा गर्ने, कृन्तकहरूलाई बाहिर राख्न प्वाल प्वाल गर्ने, सामान्य मौसम संरक्षण।
सबै ड्रेन पाइपहरू हटाएपछि पाइपलाइनको पूर्ण फ्लशिंगले सञ्चित बालुवा र मलबेको सिंचाइ प्रणाली सफा गर्नुपर्छ। सबै ड्रेन पाइपहरू बदल्नुहोस् र निश्चित गर्नुहोस् कि पानी मुख्य रेखाबाट पूर्ण रूपमा निकालिएको छ। पम्प र सिंचाई प्रणाली बीच फ्रिज लाइन माथिको कुनै पाइपिंगको तल्लो भाग सबैभन्दा तल्लो बिन्दुमा राइजर जडान गरिएको हुनुपर्छ; यो पाइप बाहिर पानी पम्पिंग को लागी पहुँच प्रदान गर्दछ।
वाल्मन्ट उद्योगबाट आएका सामग्रीहरूमा आधारित
टैग: स्प्रिंकलर मेसिनहरूजाडोको लागि तयारी गर्दै
उत्सव "Vinta बाट!" का सहभागीहरू! AGROSALON-2020 प्रदर्शनीमा तिनीहरूको घटनाहरू प्रस्तुत गर्‍यो